Arsenal oo lumisay fursad ay Man United ugu dhawaan lahaayd – SBC
Arsenal oo lumisay fursad ay Man United ugu dhawaan lahaayd
Kooxda Arsenal ayaa geftey fursad dahabi aheyd oo ay ku taamaysay isla markaana qayb ka aheyd dadaalkeeda ku guuleysiga horyaalka Premiership-ka Ingiriiska ka dib markii ilbiriqsigii ugu dambeeyey laga dhigay rigoore uu dhulka ku dhacay ciyaaryahan Lucas oo ka tirsan Liverpool.
Dirk Kuyt ayaa shabaqa Arsenal ku hubsadey goolkii rigooraha isagoo meesha ka saarey goolkii kale ee isna rigooraha ahaa ee daqiiqada ka hor uu dhaliyey weeraryahanka reer Holand ee Arsenal u qaata lambarka 10-aad Robin Van Persie.
Ciyaartan oo ka dhacdey garoonka Emetares ee kooxda Arsenal waxay gaartey 100 daqiiqo ka dib markii mudo lagu daahay dhaawaca kabtanka Liverpool jamie Carragher oo dhaawac xun soo gaarey.
Goolka Arsenal wuxuu yimid ka dib markii kubad uu la dhexmarey difaaca Liverpool kabtanka Arsenal Cesc Febreges taasi oo keentey in uu jilaafo u dhigo Jay Spearing, waxaana rigooradii loo dhigey u saxiixay Van Persie oo haatan 13 gool leh.
Laakiin damaashaadkii & farxada Arsenal waxaa lumiyey ka dib markii garsoorihii ciyaarta uu u dhigay Liverpool rigoore ka gadaal markii Emmanuel Eboue uu riixay Lucas, waxaana rigooradii la dhigay u saxiixay Kuyt, sidaasina ay ciyaartii ku soo gabowgabowdey 1-1 waxaana Arsenal oo hal ciyaar u baaqi tahay ay 7 dhibic ka hooseysa Man United oo hogaanka ku haysa 69 dhibcood halka Chelsea-na ay ka sareyso 2 dhibcood oo kaliya.
Apriil 18, 2011 at 6:10 pm
Aad umahadsantihiin update aad samaysen webkana xaqiiqdii waa isoojiitay